Xeebaha ugu wanaagsan ee Badda Madoow ee Romania | Wararka Safarka
Mariela Carril | | Xeebaha, Roomaaniya
Ma kugu soo dhacday inaad ku bixiso fasaxa xagaaga ee Romania? Dalkan ku yaal Yurub wuxuu leeyahay xeeb qurux badan oo ku taal Badda Madow oo lagu sharraxay dalxiisyo qurxoon, cimilo diiran, maylal iyo maylal xeebo leh, beero canab ah iyo magaalooyin duug ah oo qurux badan oo la booqdo
Xeebaha ugu fiican Romania waa kuwa ku yaal inta u dhexeysa Mangalia a Mamaia, waa halka ay hudheeladu seexdaan, gastronomy-ka iyo qaab dhismeedka dalxiis ee ugu badan. Waxaan kugu martiqaadayaa inaad soo ogaato xeebahan waaweyn oo aad u doorato fasaxyadaada.
1 Xeebta Badda Madow ee Romania
2 Mamaia, kuwa ugu caansan
3 Waqooyiga Eforie
4 Koonfur Afrika
Xeebta Badda Madow ee Romania
Xeebta Badda Madow Waxay caan ku ahayd qarniyo badan inay tahay meel lagu daaweeyo ama lagu daaweeyo cudurada lafaha iyo maqaarka, laabotooyinka, arthritis-ka ama dhibaatooyinka neerfaha, tusaale ahaan. Markaa muddo ka dib dalxiisyadan badan ayaa laga abaabulay hareeraha dalxiiska fayoqabka ama daawo.
Taasi way sii jirtay ilaa maanta sidaas dabacsanaan kama maqna Waxay bixiyaan qubeysyo dhoobo ah oo si toos ah looga soo qaado harooyinka cusbada leh ee aagga ku yaal isla markaana gaadhay sumcadda adduunka.
Dhinaca kale, dadka fasaxyadooda ku qaata xeebta waxay aadi karaan caadi ahaanna safaro yar yar oo ay ku galaan gudaha si ay u bartaan oo ay u ogaadaan waxyaalo yaab leh oo kale: buugaagtii hore ee Bucovina, Bucharest ama Danube delta, tusaale ahaan.
Sidaas, meelaha dalxiis ee ugu caansan ayaa ku kala firirsan ku dhowaad 300 kilomitir oo xeeb ah waxaana ka mid ah caanka ah Mamaia, Neptune, Saturn, Venus, Jupiter, Olympus ama Eforie Nord, Eforie Sud, Cap Aurora, Costinesti, Vama Veche, iyo kuwo kale.
Mamaia, kuwa ugu caansan
Waa goobta ugu weyn uguna caansan xeebta Romania. Dhererkiisu waa toddobo kiiloomitir, ballaciisuna wuxuu u dhexeeyaa 100 ilaa 250 mitir. Ciida agteeda waa hudheelada quruxda badan ee badda fiiriya.
Xilliga xagaaga wuxuu soconayaa bilowga Maajo ilaa Sebtembar oo ka baxsan xilliga fasaxa waxaa jira qof aad u adag. Waxay ku taalaa inta udhaxeysa Badda Madoow iyo Harada Siutghiol iyo taariikhahan heerkulku wuxuu ku dhow yahay 30 pleasantC wanaagsan.
In kasta oo hudheeladu yihiin afar iyo shan xiddigood waxaad ka heli kartaa hoy raqiis ah ama aad kaamam tagto, laakiin sida iska cad, maahan meesha ugu raqiisan dhamaan.
Waa dalxiis dalxiis, aad uga dagan Mamaia. Waxay ku taal inta u dhexeysa Badda Madoow iyo Harada Techirghiol, dhawr mitir oo ka sarreysa heerka badda. Waa meel caan ah oo la tago sanadka oo dhan iyo ujeedadiisu waa in ka badan dalxiiska qoyska maadaama xeebaheeda ay yihiin biyo deggan.
'Sanatorium' kii ugu horreeyay wuxuu soo ifbaxay dabayaaqadii qarnigii XNUMXaad dadkuna waxay ku sii socdaan cudurrada qaarkood si ay ugu noolaadaan dalxiiska fayoqabka. Waad ka faa'iideysan kartaa daaweyntooda sawnada, qubayska dhoobada, daaweynta jimicsiga ee yareysa walbahaarka, iyo noocaas oo kale.
Waxay u jirtaa shan kiilomitir Eforie Nord iyo 19 kilomitir Constanta. Waa dalxiis caan ah illaa 1912 laakiin markaa magaceedu wuxuu ahaa Carmen Sylva. Xitaa wuu ka aamusan yahay in walaasheed ka weyn iyo jidadkeeda cidhiidhsan dhammaantood ay ku qulqulaan badda.
Dalxiiskan dalxiis ayaa ku yaal meel ka sarreeya meelaha kale ee dalxiisyada Romania laga soo tago maadaama buurta ay ku taal ay ka sarreyso, waa qiyaastii 35 mitir. In kasta oo ay ka aamusan tahay, macnaheedu maahan inaysan jirin nolol dalxiis.
Meesha ugu fiican ayaa ah xeebta Wayn, qurux leh baararka, dalladaha, miisaska iyo kuraasta lagu raaxeysto maalinta. Ugu dambeyntii, daaweynta quruxda leh dhoobada laga soo qaado harada Lake Techirghiol ayaa sidoo kale lagu bixiyaa halkan.
Dalxiiskan dalxiiska ah wuxuu 38 kiiloomitir u jiraa Constanta, wuxuu ku toosan yahay cirifka kaynta waa cagaar cagaaran inta kale.
Waxay leedahay labaatan hudheel oo waxa jira noocyo badan oo kala duwan maqaayadaha, baararka, makhaayadaha iyo teeral ay dalxiisayaashu fadhiyaan gaar ahaan. Dalxiisayaashan ayaa isugu jira dhalinyaro iyo waayeel qoysna leh tan iyo waxaa jira ciyaaro isboorti, shineemo hawada furan, tiyaatarro iyo jardiin madadaalo.
Waa goob dalxiis oo aad ugu dhow Neptune sidaa darteed ficil ahaan waxay ka kooban yihiin hal. Haddaan gooni u qaadanno waa yaryahay laakiin sidoo kale aad loo jecel yahay xagaaga.
Xitaa waxay caan ku ahayd xilliyadii shuuciyadda oo waliba aad buu qaali u ahaa. Kaliya dadkii uu ku casuumay madaxweynihii xilligaas, Ceausescu, ayaa cagta saaray.
Xeebta dhererkeedu waa kiiloomitir oo keliya oo wuxuu ku dul fadhiyaa bad-weynta u jabtay biyo-xidheennada iyo biyo-xidheennada. Hadaad raadinayso a meel yar oo aad u deggan tani waa tan ugufiican maadaama ay tahay meelaha ugu yar dalxiiska Romania oo dhan.
Waxaa jira makhaayado, naadiyo iyo baarar ku filan oo lagu baashaalo iyadoo aan buuq la sameyn.
Maaha meesha ugu kulul xagaaga waxayna ku taal meel u dhexeysa Jupiter iyo Saturn. Meesha ay ku taallo ilaa iyo hadda bariga waxay u jirtaa qiyaastii laba iyo toban saacadood oo qorrax ah maalintii taas waa wax fiican.
Degenaanshihiisa, dalabkeeda cadaalada ee madadaalada iyo gastronomy iyo bixinta isboortiga biyaha iyo isboortiga oo ay ka dhigtay dalxiis wuxuu soo jiitaa dadka waaweyn.
Neecawda badda ayaa cusbooneysiisa xilliga xagaaga oo gaarto xeebteeda oo dhererkeedu yahay laba kiilomitir oo ku wareegsan hudheelo iyo hoteelo. Waxa kale oo ay leedahay laba guri oo dalxiis, Delta iyo Danube, oo leh guryo raaxo leh iyo madadaalo u gaar ah oo ay bixiyaan, waxaan sidoo kale hudheellada qaarkood ka helnaa baaxado
Satnoronna waa magaalo xeebeed aad u qurux badan, oo ubaxyo badan leh waddooyinkeeda iyo agteeda qiimayaasha la heli karo ka badan kuwa deriska ah.
Waxay u jirtaa 45 kilomitir Constanta iyo xeebteeda waxaa lagu sharraxay buur dheer. Maaha magaalo ee waa magaalo caan ku ah xarumaheeda caafimaadka kuwaas oo ku takhasusay markay tahay daweynta cudurada iyo cilladaha maqaarka iyo jidhka.
Waxay leedahay soo jiidasho taariikhi ah tan iyo markii ay taagan tahay isla meeshii laga dhisay Qalcadda Callatis ee qarnigii XNUMXaad (maanta waxay ku leedahay makhaayad dabaqa hoose oo si weyn loogu taliyay), qaar badan howlaha dhaqanka, suugaanta, jilitaanka, iyo xagaaga saacado badan oo qorax ah.
Maahan meel aad u kulul, xisaabiya intaas xagaaga kama badna 25ºCMarkaa haddii aadan jeclayn hirarka kuleylka, tani waa meel aad u wanaagsan. Xaqiiqdii, dhammaan xeebaha Badda Madow ee Romania waa sidan oo kale, oo leh qorrax badan laakiin aan kululayn haba yaraatee.
Haddii aad tahay xoogaa hippie ah ama aad rabto wax ka dabacsan markaa kani waa meesha ugu fiican ee wax lagu iibiyo oo dhan maxaa yeelay beegsada dhalinyarada. Waxay u jirtaa 31 kilomitir Constanta iyo xeebteeda waa dherer 800 mitir ah, inkasta oo ay tahay mid cidhiidhi ah maxaa yeelay ballackiisu wuxuu u dhexeeyaa 10 ilaa 15 mitir.
Badanaa waxaa jira arday badan, qiimaha waa hooseeya, waxaa jira hoteello badan oo yaryar, guryo kiro dalxiis iyo xeryo. Xitaa waxay leedahay haro yar, aad iyo aad u cusbo badan oo dhoobo ah oo lagu daweeyo laabotooyinka.
Sida aad u aragto waxaa jira meelo badan oo xagaaga loo tago oo ku yaal xeebta Badda Madow ee Romania, mid loogu talo galay dhadhan kasta iyo dalxiis kasta: raaxo, xasilloon, hippi, qoysaska carruurta leh iyo kuwa ka weyn 60.
Tani waa muunad ka mid ah qaar ka mid ah xeebaha ugu caansan ee la yaqaan laakiin iyagu maahan kuwa kaliya. Xeebaha kale waa Corbu, Vadu, xeebo badan oo aan la daboolin, Mai xasilloon, Vama Veche, Cap Aurora oo liistadu socoto. Waa inaad doorataa halkaad u socoto, laakiin sidaad u aragto Romania waxay leedahay dalab xagaaga aad u balaaran.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » safarka » Xeebaha » Xeebaha ugu wanaagsan ee Badda Madoow ee Romania
Waqooyiga Sentinel, oo ah jasiiradda cunnida dadka